Ampitahao ny mari-pahaizana PMP V / s PRINCE2
PMP V / s PRINCE2:Ny hetsika voalohany mankany amin'ny zava-bita dia mety ny hisafidy ny antso iray saingy ny fihazakazahana manaraka dia azo antoka fa hisafidy eo amin'ireo fitaovana fianarana samihafa sy ny fanamafisana izay manatsara ny fahaiza-manao takiana mba ho ampy tsara indrindra ho an'ny asa.
Ao amin'ny fitantanan-draharahan'ny Venture, ny roa ampaham-bola roa tena mankasitraka ny fanampiana goavana amin'ny tompon'andraikitra manokana momba ny mari-pahaizana dia PRINCE2 - fanafohezan-teny momba ny toe-pahasalaman'ny Tasks IN Controlled sy ny PMP - mijanona ho an'ny Venture Administration Proficient. Amin'ny maha-manam-pahaizana vaovao matanjaka azy, ahoana no tokony hisafidianana izay akademika izay hanome ny fitaovana tena ilaina amin'ny mpanohitra ary hanome ny hery mitarika ao amin'ny sehatry ny fitantanana Vondrona matanjaka be?
PMP V / s PRINCE2: Inona ny fifandonana mibaribary?
PMP dia fanamafisana. (PMP dia mifantoka amin'ny fomba).
Na izany na tsy izany, PMP Tsy fianarana tsotra fotsiny no azonao iainana. Fanamarinana izany, fa mihoatra noho izany ny fandaharan'asa fampahafantarana, izay nanomboka tany Etazonia voalohany. Fitsipika izay fijerin'ny fikambanan'ny mpitsoka mozika amin'ny ankapobeny ny fehezanteny momba ny fifantenana ny fahaiza-mifidy ao amin'ny sehatry ny governemanta, ary ahitana ny filôzôfia mifanipaka amin'ny orinasa samihafa, ny fomba fianarana sy ny famoahana ny fepetra ary ny fahaiza-manaon'ny fisainana ilaina mba hamaranana ny lehiben'ny Venture ho avy.
Ireo olona izay mikambana ao amin'ny orinasa dia hahita fa ny fanamafisany sy ny fitenenana manontolo amin'ny teny izay hanampy azy ireo hahatakatra tsara kokoa ny fomba fitantanana fitantanana tsara kokoa. Tsy isalasalana fa miantoka ny fikarakarana miabo tsara kokoa ary ireo izay manantena ny hanao fiantsoana any Amerika Avaratra amin'ny maha-Business Improvement Director dia azo antoka fa handray anjara amin'ny seza voalohany ao amin'ny tsanganana voalohany. Manome fanamafisam-peo mahatalanjona eo amin'ny sehatry ny rafitra izy, manampy ireo mpanjifany ho tonga miaraka amin'ny orinasam-pandrosoana voalohany izay mahatonga ny CV ho tena lehibe tokoa mandritra ny fotoana maharitra.
Avy eo indray, PRINCE2 - izay eritreretina any UK (Focusses on Why) - dia rafitra fitantanana Venture amin'ny tenany manokana, izay manana fitsipika manokana momba ny fomba fandaminana sy famoahana ny firoboroboana, hamaranana amin'ny fikarakarana, ny endrika sy hevitra izay azo ampiasaina eo am-pelatanana . Ny anjara sy andraikitry ny mpiara-miasa tsirairay dia ny manandrana. Ny singa ao anatiny dia mampifanaraka ny fandaminana ny orinasa amin'ny alàlan'ny fandaharam-panatanterahana, ny fandaminana ny planina sy ny fikarakarana vondrona.
Ireo olona izay efa niaina izany filozofia amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny fihetseham-po fa samy manana ny firoboroboana sy ny dingana mifantoka izy ireo, ary mahafa-po tsy tapaka ireo kapila roa. Koa satria fanamafisana tanteraka izany, dia manomana fototra amin'ny mpianatra izany mandrakizay, mampiseho azy ireo ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fananganana ny firoboroboan'ny fandrosoana tsirairay, ary manampy azy hanatsara ny fahasamihafana koa ny karama midadasika izay ho azony rehefa mahazo tombony ara-panjakana izy toerana. Amin'ny alalàn'ny rafitra napetrak'izy ireo, ny mpanjifa avy amin'ny firenena rehetra dia afaka mahatakatra sy manatanteraka ny fandaharam-potoana amin'ny sehatr'izy ireo manokana, ka mahatonga ny teknika ho tena zava-dehibe ao amin'ny sehatry ny orinasa tsirairay.
Mifanaraka amin'ny fomba ilain'ny manam-pahaizana hamantatra ny fahatakarana, izay ilainy ny mahita ny tenany sy ny indostriany mila miasa, ary ny toerana misy azy ara-jeografika dia afaka manapa-kevitra izy roa.
3 Courses ho mpitsikilo amin'ny Project Management Professional Training